एमाले महाधिवेशन– मतदान अन्तिम चरणमा, लगत्तै मतगणना शुरू गरिने
नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वका लागि भएको मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
चितवनको सौराहामा बिहान ४ बजे शुरू भएको मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
बिहान साढे १० बजेसम्म २ हजार प्रतिनिधिले मतदान गरिसकेका छन् । मतदानको समय बिहान ११ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ ।
मतदान सकिएलगत्तै मतगणनाको काम शुरू हुने नेकपा एमालेको निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव गरी १४ पदका लागि मतदान भइरहेको हो । अध्यक्षमा केपी ओली र भीम रावल प्रतिस्पर्धामा छन् ।
केपी ओलीले गरेको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसाल र सचिवमा भीम आचार्य तथा टंक कार्कीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
मतदान स्थलमा भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई भोट नदिन पर्चा बाँडिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको जारी मतगणनामा मेयर पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले मतान्तर फराकिलो पार्दै अग्रता कायम राखेकी छन् । ७० हजार ४७४ मत गन्दा दाहालले २७ हजार ४१२ मत ल्याएकी छन् । ...
गएरातिको हावाहुरीले चितवनमा वितण्डा, हेर्नुहोस् ११ तस्वीरमा [तस्वीरहरू]
चितवनका दुई स्थानमा हावाहुरीका कारण रुख ढल्दा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले भरतपुर–११ भोजाडमा रुख ढलेर अटो च्यापिदा २ जनाको घटनास्थलमै ...
भरतपुर महानगरपालिका अपडेटः कसको कति मत आयो ?
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा रेनु दाहालको अग्रता कायमै रहेको छ । शनिबार बिहान साढे ७ बजेको मतपरिणामअनुसार माओवादी केन्द्रबाट मेयर उम्मेदवार बनेकी उनले ५ हजार १३३ मतको अग्रता बनाएकी छन् । रेनुले...